हामी जित्छौं र रोल्पा जिल्लामा जनसत्ता चलाउँछौ– पूर्ण केसी ‘करेन्ट’ - Everest Dainik - News from Nepal
हामी जित्छौं र रोल्पा जिल्लामा जनसत्ता चलाउँछौ– पूर्ण केसी ‘करेन्ट’
माओवादी युद्दकालको चर्चित भूमि रोल्पा । कुनै बेला युद्दको रापले तातेको रोल्पा अहिले पनि चुनावको रन्कोमा छ । स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनको उत्साह चुलिँदै गएको बेला रोल्पा नगरपालिकाबाट माओवादी केन्द्रको प्रत्यासीका रुपमा पुर्ण बहादुर केसी ‘करेन्ट’ले उम्मेदवारी दिएका छन् । हिजोको रोल्पा र आजको रोल्पामा फरक छ र योसँगै चुनौती पनि चुलिएका छन् माओवादी उम्मेदवारका सामु । के छन् त माओवादीका चुनौती, के छ एजेण्डामा चुनाव लड्दैछन् उनीहरु, मेयरका उम्मेदवार ‘करेन्ट’सँग एभरेष्ट दैनिकका लागि पुष्पा महराले गरेको कुराकानीः
चुनावी उत्साह राम्रो छ । गाउँ गाउँमा बेग्लै उत्सव छाएको छ । लामो समयपछि राजनीतिकरुपमा सक्रियता देखिएको छ । हामी पनि उत्साहित छौं । यो जनयुद्धकालिन आधार हो हाम्रो । त्यसैले हाम्रो जनधार बलियो छ । हिजोका दिनमा पनि हामी हरेक पल जनतासँगै हुन्थ्यौं, आज फेरि उनीहरुमाझ पुगेका छौं । परिस्थिति फरक भएपनि जनताले हामीलाई नै विश्वास गर्छन् । त्यसैले जनताको यस्तो उर्लंदो जनलहर देख्दा माओवादी केन्द्रको विजय निश्चित देखिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस भट्टी पसलमा फालिएको अमूल्य भोट
यो अनावश्यकरुपमा सिर्जना गरिएको चर्चा हो । रोल्पा जिल्ला हाम्रो बलियो गढ हो । त्यसैले यहाँ हरेक कमरेडहरु उत्तिकै सक्रिय र सक्षम छन् । यो मध्ये कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषय पार्टीले टुंगो लगाउने विषय हो । कांग्रेस एमालेलगायतका केही विपक्षीहरुले केही एजेण्डा नपाएर यो हल्ला चलाएका हुन् । उम्मेदवारी दिनका लागि छलफल गरी यो कदम चालिएको हो । क. ध्रुव र क. ऋषिराम रोकाको रोहवरमा मलाई नै मेयरका लागि चयन गरिएको हो । सुवर्णावती गाउँपालिकामा निर्वाचनको माध्यमबाट उम्मेदवार छनौट गरियो । तर रोल्पा नगरपालिकामा भने लामो छलफलपश्चात मलाई मेयरको उम्मेदवार उठ्न पार्टीले जिम्मेवारी दिएको हो । कृष्ण बहादुर महरासँग मेरो नाता पर्छ । तर मेयरमा उम्मेदवार हुनुमा त्यो नाताले काम गरेको होइन । म लामो समयदेखि पार्टी र जनतासँग जोडिएको छु । मेरो योगदान, मेहनत र क्षमतालाई मूल्यांकन गरी उम्मेदवार बनाइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस अषाढ ९ मा निर्वाचन मिति तोकिएकोमा एमालेको आपत्ती
अब चाहिँ के गर्छौं त ? यो प्रश्न सबैले गरेका छन् । कमरेडहरुले घोषणा गरिसकेका छन्, हामी रोल्पालाई जनसत्ताको नमूना जिल्ला बनाउँछौं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक, शैक्षिक तथा यातायातको दृष्टि हामी रोल्पा जिल्लालाई विकसित बनाउनेछौं । यहाँ निमार्णाधिन कृषि विश्वविद्यालयलाई पूर्णता दिँदै शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्छाैं । यहाँको सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित छौं । जडिबुटी, तरकारी तथा अन्न उत्पादनमा अधुनिकीकरण गर्छौ । संचारलाई जोड्नलाई फ्रि वाईफाई तथा विद्युत जोड्ने र विस्तार गर्छाै । वेरोजगार युवाहरुका लागि लोकसेवाका लागि तयारी कक्षाहरु संचालन गर्छाैं । रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने लगायतका एजेण्डाहरु हामीले अघि सारेका छौं ।
हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको हिजो जनताले जे सपना साँचेका थिए, तिनीहरुलाई अधिकतम पुरा गर्ने नै हुनेछ । सामाजिक न्यायसहितको स्थानीय सत्ता, श्रोतमा सबैको पहुँच हुने स्थानीय सत्ताको निर्माण हाम्रो लक्ष्य हुनेछ । यसका लागि पार्टीको योजना र जिल्लाको योजनाका आधारमा हामी अघि बढ्छौं ।
यी एजण्डाहरु सहजै पूरा गर्न सकिन्छ । उसैपनि बढी त यहाँ हाल निर्माणाधिन कुराहरुलाई हामीले निरन्तरता दिई पूर्णता दिने न हो । यहाँ इमान्दार जनता, व्यापारी अनि वुद्धिजिविहरुले हामीलाई साथ दिइएमा हामी हाम्रा ती एजेण्डाहरु पूरा गर्न सक्छौं भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
सबैभन्दा ठूलो भनेको जनताकाे अभिमत हो । विस २०४८ साल पहिले पनि चुनाव हुँदा हामीले ७०/८० वटा पूर्वगाविसहरुमा जित्न सफल भएका थियौं । त्यसैले पनि अहिले पनि जनतामा हामीप्रति विश्वास छ । हामीले नै केही गर्न सक्छौं भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । यहाँका सहिद परिवार, कार्यकर्ता अनि यो सिंगो रोल्पावासीले नै माओवादीलाई नै चुन्नेछन् अनि जिताउने छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
ट्याग्स: maoist center, Purna KC, pushpa mahara, Rolpa Municipality, Second Phase Election